2015 – Year – Alpha Premium
Warm and Cozy အပိုင်း(၁ မှ ၁၆ ထိ) စ/ဆုံး Warm & Cozy ဆိုတဲ့စီးရီးဟာ ကြည်လင်အေးမြတဲ့ အလှတရားတွေပေါင်းထည့်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးလို့ဆိုချင်တယ်.. လောင်ရတဲ့စီးရီးတွေကျွန်တော်တို့ သဘောကျတယ်..လက်ရှိလောကမှာလည်း ဒီလိုမျိုးတွေကြုံဆုံနေကြရတာပဲမလား… …ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ခါတစ်ရံ ညှို့အားပျင်းတဲ့ နှင်းဆီရနံကို ရှုရှိုက်ချင်သလို လတ်ဆတ်တဲ့လေပြေလေညှင်းလေးကိုလည်း မျက်လုံးမှိတ်ရင်း ခပ်ပြုံးပြုံးလေး ခံစားချင်တတ်ကြတာ သဘာဝပဲမဟုတ်လား… Warm & Cozy ထဲမှာ တော့ Dr. Romantic , Hospital Playlist တွေနဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်အကြားလူသိများတဲ့ ခပ်ဖြောင့် ဖြောင့်ကောင်လေး Yoo Yeon Seok နဲ့ Doctor Stranger ထဲမှာ မင်းသားနဲ့ ညားပါစေလို့ ဆုတောင်းခဲ့သလောက် မပြည့်ခဲ့ရတဲ့ ဂျစ်ကန်ကန်ကောင်မလေး Kang So Ra တို့ပါဝင်ထားပါတယ်… ပြီးတော့ Second Leadတွေကလည်း အကုန်ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်တွေချည်းပါပဲ… အလန်းဆုံးကတော့ ဂျယ်ဂျူကျွန်းရဲ့အလှအပတွေကို ခံစားရတာပါပဲ.. ပန်းခင်းမျိုးစုံနဲ့ ပင်လယ်ပြင်အလှနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုကိုခံစားရတာပါ…
Better Call Saul အားလုံး မျှော်နေတဲ့ crime drama လာပါပြီ Better Call Saul က Breaking Bad ရဲ့ spin-off series တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် breaking bad ကို မကြည့်ဖူးလည်း ဒီ series ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်တော့ James McGill ဆိုတဲ့ မကျော်မကြားရှေ့နေတစ်ယောက် အခက်အခဲတွေကြုံရာကနေ လူသိများလာအောင် ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်ပေါင်းစုံထုတ်ပြီး အကြံအဖန်ထုပုံတွေကို စိတ်၀င်စားဖွယ်မြင်တွေ့ရမှာပါ တည်ကြည်လေးနက်တဲ့ ရှေ့နေ James ဘ၀ကနေ လောဘသမား Saul Goodman ကို ဘယ်လိုတွေ ကူးပြောင်းသွားမလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြည့်ရှူခံစားလိုက်ပါတော့ ….
TMDb: 8.3/10 1863 votes
TMDb: 7.1/10 1970 votes